Shangri-La bụ a ise ukwu oghere egwuregwu na iri na ise ofu paylines dabeere na a mythical akụkọ nke oge ochie Tibet. What makes this best slots jackpot game is mind blowing graphics along with an impressive jackpot reward. The egwuregwu na-edoziri na backdrop nke a osimiri iyi na temple na ugwu echiche na nnọọ anya kpokọtara. The music ke ndabere bụ nnọọ soothing na-enyere aka na ị nọgide na-nwayọọ na-elekwasị anya na uche. The ikuku ke egwuregwu na-ewe gị ka a kpamkpam dị iche iche ụwa nke pụrụ ichetụ n'echiche na emenye visuals. Iji na-edebe gị nzo, i nwere ike ịhọrọ site na dị ka ala dị 20p na-aga ruo-egwu egwuregwu ahụ kacha nke £ 90 kwa atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke Shangri-La
Nke a kpokọtara kacha mma ohere mpere jackpot game e mepụtara site NextGen (NYX), a na-ewu ewu cha cha development brand na n'elu iri afọ abụọ nke ahụmahụ. Ha kere ọtụtụ narị dị iche iche udi nke cha cha egwuregwu na emewo ka ha otu n'ime top iri ụlọ ọrụ dị na ụwa.
Nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma ohere mpere jackpot game mgbe ọ na-abịa elu-edu ndịna na ụda. E nwere ụfọdụ ndị magburu onwe nnọchianya nke na-acha ọcha tiger, enyí, enyí ọhịa, temple, mma na Lotus okooko osisi. The top na-akwụ ụgwọ na akara bụ onye ọzọ karịa ndị dị ike na-acha ọcha tiger na ntị na a na-emeri nọmba nke 500 ugboro n'osisi. Iji nweta na mkpa ka i nwere ise akara gafee ike payline, nke bụ center n'usoro na-esi anwụde. The ala-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya ndị ebre kaadị diamond, spade, obi na club na anya dị ka gemstones. E nwere asaa bonus akara na egwuregwu a na ha na-atọ iche iche na akara nke girl na anọ oval ekara artefacts.
Wild Atụmatụ: The foto nke a mara mma girl na a etiti bụ anụ na akara ma ọ na-ekpuchi ihe niile isi na akara. Ọzọkwa, ọzọ picture na a ọkụ udo etiti enweghị usoro na-egosi dị ka anụ na-enye ihe na-emeri ihe n'ịgwa. E nwekwara a-ekwe omume nke stacked ọhịa ebe ihe dum ọnụ ọgụgụ nke girl na-egosi na-enye mma-enweta nkwanye.
Gbasaanụ Njirimara: The ekpere wheel bụ ikposa atụmatụ a kacha mma ohere mpere jackpot egwuregwu na atọ ma ọ bụ karịa nke ya akpali bonus atụmatụ. Ise nke a na akara gafee a payline nwekwara akpali jackpot bonus ebe ị ga-esi 3000 mkpụrụ ego enweta nkwanye. Nke a nwere ike inwe oké ma ọ bụrụ na ị na-na-egwuri egwu elu-uru nzo.
Na catchy ndịna na yi akara, a kacha mma ohere mpere jackpot game awade a dịgasị iche iche nke bonus atụmatụ ị nwere ike imeri site. Nke a bụ n'ezie ndị kasị mma egwuregwu na-agbalị ma ọ bụrụ na ị na-ruo-eme ụfọdụ dị oké njọ ewepụ.